Diinta Islaamka Waa Iftiin Waana Naxariis .. Sida Ay Ku Soo Islaamtay Sahrah Jane Booth Ee La Dhalatay Xaaska Riisal Wasaarihi Hore Ee Dalka Ingiriiska
Xilli lagu jiro Bil Ramadaan ayaan booqday haweenay aan waxba heysan Sabool oo Muslim ah, albaabka markaan garaacay ayay iga furtay iyadoo leh Asalaamu Calaykum, Soo dhowoow .. Waxaa dhabtii iiga muuqday iftiin, indhaheeda iyo korkeedaba waa nuurayeen. Waxay ila ahayd inaan galay “Taj Mahal” oo ka mid ah meelaha ugu qurxoon dunida ee loo dalxiis tago, sidii in ay ku nooshahay guriga ugu quruxda badan aduunka, Sidaas waxaa tiri haweenay la yiraahdo Sarah Jane Booth oo ah gabar la dhalatay xaaska Ra’iisal wasaarihi hore ee dalka Ingiriiska Tony Blair.
Haweenaydan ayaa iyadoo sii wadata hadalkeedii waxa ay tiri: kolkaan gudaha u galay guriga waxba ma oolin oo wuu marnaa. Keliya gidaar, safiitada iyo roog dhulka yaalay oo ay saarnaayeen wax aad u yar oo afur hal qof loogu talagalay.
Waan ka diiday Wallaahi waxaan isku dayay in aan ka cunin laakiin way igu cadaadisay inaan cuno iyadoo leh Marti baa noo tahay. waxay i siisay wax badan. Waan carooday, Waxaan u carooday Islaamka, waxaan ka carooday maxaa Quraanka loogu faray dadkan gaajeysan in ay 30 maalmood sii gaajeysnaadaan oo aysan wax cabin waxna cabin?
Haddaba Haweenaydan oo soo islaamtay ayaa mar ay warbaahinta la hadleysay waxa ay ka sheekaysay sababihi ay ku soo Islaamtay waxayna tiri sidan: Islaantii aan gurigeda ku booqday ayaan weydiiyay, “Maxaad u soomaysaa Bisha Ramadaan waxba ma haysatide ? Waxay iigu jawaabtay, “Waxaan u soomaa Bisha Ramadaan inaan xusuusto kuwa saboolka ah ee iga sii liita!!
Allaahu Akbar Hooyadan aan wax hanti ama xoolo ah aan ku haysan Aduunkan ayaa Qalbigeeda u liidaysa kuwa wax ka sii yar heysta. Waa maxay Waxan? Haweenaydan iyadoo waxba heysan, faraxsan, qanacsan hadana Alle ugu Shugrinaysa calool maran. Waa maxay Waxan ayaan is weydiiyay hadana. Waxaan ku fakiray markaa haddii Diinta Islaamku sidaan u macaan badan tahay, waxaan rabaa in aan Muslim noqdo waanan ku qancay! .. Diinta islaamku waa iftiin Waa Naxariis